ဘောလီဝုဒျက မူးယဈဆေးဝါး အသုံးပွုပုံအကွောငျး ဖှငျ့ပွောလာတဲ့ ကနျဂါနာရေးနော့ - SANTHITSA
Tags: cele news, international news
ဟငျဒီရုပျရှငျလောကမှာ ဆိုရငျ ကနျဂါနာရေးနော့ လို့ ဆိုလိုကျရငျ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ထုပျလုပျသူအဖွဈ လူသိမြားတာထကျ ရုပျရှငျလောကသားတှကေို ပဈြပဈြနှဈနှဈ ဝဖေနျတတျသူ အဖွဈ ကြျောကွား တာက ပိုပါတယျ။ မီဒီယာသမားတှေ အကွိုကျ မငျးသမီး တဈလကျပါ။
သူမရဲ့ ဖကျရှငျကတြဲ့ ဝတျပုံ ဆငျပုံတှထေကျ ရုပျရှငျလောကရဲ့ အတှငျးရေးတှေ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲရေးအတှကျ ပွောတဲ့ စကားတှကေ မီဒီယာတှကေို ပိုပွီး စိတျဝငျစား စပေါတယျ။ လောလောဆယျမှာလဲ ဘောလီးဝုဒျက ထိပျတနျးရုပျရှငျ မငျးသားတဈယောကျ မူးယဈဆေး လှနျပွီး အိန်ဒိယကထိပျတနျး ဆေးရုံ တကျရတာနဲ့ ပတျသကျပွီး သူမရဲ့အမွငျကို မီဒီယာတှကေ လာပွီး မေးမွနျးပါတယျ။
“ အိန်ဒိယ ရုပျရှငျလောကမှာ မူးယဈဆေးဝါးဆိုတာ ထမငျးစား ရသေောကျအဆငျ့ ဖွဈနတော ကွာပါပွီ။ ကမြက ဘောလီးဝုဒျက ထိပျတနျးမငျးသားတှေ တျောမြားမြားနဲ့ အလုပျ လုပျဖူးပါတယျ။ ကမြ အမွငျကတော့ ရုပျရှငျထဲမှာ သရုပျဆောငျဖို့အတှကျ မူးယဈဆေးဝါးက မလိုလောကျဘူးလို့ ထငျတာပဲ” လို့ သူမက ဆိုပါတယျ။ မနကေ့ သူမရဲ့ အငျတာဗြူးမှာ သူမက စကားတှေ အကွာကွီး ပွောခဲ့ပါတယျ။
“ ဘယျသူတှကေ ဘာလဲဆိုတဲ့ လှို့ဝှကျခကျြတှေ ကမြ သိထားတာတှေ အမြားကွီးပါ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ သူတို့တှကေ ကမြကို အမွဲလို ရနျရှာခငျြ နကွေတာပါ။ ဥပမာတဈခု ပွောပွမယျ ။ ကမြရဲ့ တှဲဖကျသရုပျဆောငျ တဈယောကျ ဆိုရငျ လာဗီးဂတျဈမှာ ရိုကျကှငျး ထဲမှာတောငျ မူးယဈဆေးတှကေို သုံးနတေယျ။
အဲ့တုနျးကဆိုရငျ နိုငျငံခွားသူ သူ့ကောငျမလေးကလညျး သူနဲ့အတူ မူယဈဆေးတှကေို သုံးနတောပါပဲ။ ညတိုငျး ပါတီပှဲတှေ လုပျပွီး မူးယဈဆေးကို ရလေို သုံးနကွေတယျ။ နခေ့ငျးဖကျမှာလညျး LSD တို့ ကိုကငျးတို့ စိတျကွှဆေးတှကေို သုံးပွီး ရုပျရှငျ ရိုကျကွတာပါပဲ။ အခု ကိုကီလာဘီငျး ဆေးရုံကို တကျနရေတဲ့ တဈယောကျကလညျး အရငျကတညျးက ဆေးလှနျပွီး ဆေးရုံ တကျဖူးပါတယျ”လို့ သူမက ဆိုပါတယျ။
“သူက မူးယဈဆေးတှကေို သူ့အဆုတျထဲကို တိုကျရိုကျ ရှုသှငျးခဲ့တယျလို့ ကမြထငျပါတယျ။ ဆေးရုံကတော့ ဘာမှ မပွောပမေဲ့ ကမြသိပါတယျ။. အဲ့လို သုံးတာကို မွငျဖူးလို့ပါ။ သူ့ရဲ့ အဆုတျတဈခုလုံး အဲ့ဒိ အမှိုကျတှေ ပွညျ့သှားလို့ နမှောပါ။
ဘောလီဝုဒျက သရုပျဆောငျ ၉၉% က မူးယဈဆေးဝါးတှနေဲ့ တဈနညျးမဟုတျ တဈနညျး ပတျသကျနပေါတယျ။ ဒါတှကေိုလညျး ရဲတှနေဲ့ နိုငျငံရေးသမားတှေ ပါးစပျပိတျ ထားကွပါတယျ။ သူတို့တှကေ အငျအားကွီးတယျ။ ပါဝါမြားတယျ။ ကမြက ဘယျလိုလုပျပွီး သူတို့ကို တှနျးလှနျလို့ ရမလဲ။
ဒါကွောငျ့ သူတို့တှကေ ကမြကို ထောငျထဲကို ပို့ခငျြ နကွေတာပါ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့သိတာက ကမြက အဲ့ဒိ အတှငျးရေးတှကေို ဖျောလိုကျရငျ ဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ ဒီအတိုငျး ကွညျ့နကွေတာပါ။ သူတို့တှကေ ကမြကို သတျခငျြနတောတော့ အမှနျပါပဲ”လို့ ရီးပါ့ဘလဈခနျြနယျ နဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ဖွခေဲ့ပါတယျ။
မောငျယဿ, REF: Bollywood life, Photo; new track life
ဘောလီဝုဒ်က မူးယစ်ဆေးဝါး အသုံးပြုပုံအကြောင်း ဖွင့်ပြောလာတဲ့ ကန်ဂါနာရေးနော့
ဟင်ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာ ဆိုရင် ကန်ဂါနာရေးနော့ လို့ ဆိုလိုက်ရင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ထုပ်လုပ်သူအဖြစ် လူသိများတာထက် ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကို ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဝေဖန်တတ်သူ အဖြစ် ကျော်ကြား တာက ပိုပါတယ်။ မီဒီယာသမားတွေ အကြိုက် မင်းသမီး တစ်လက်ပါ။
သူမရဲ့ ဖက်ရှင်ကျတဲ့ ဝတ်ပုံ ဆင်ပုံတွေထက် ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ အတွင်းရေးတွေ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအတွက် ပြောတဲ့ စကားတွေက မီဒီယာတွေကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စား စေပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာလဲ ဘောလီးဝုဒ်က ထိပ်တန်းရုပ်ရှင် မင်းသားတစ်ယောက် မူးယစ်ဆေး လွန်ပြီး အိန္ဒိယကထိပ်တန်း ဆေးရုံ တက်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့အမြင်ကို မီဒီယာတွေက လာပြီး မေးမြန်းပါတယ်။
“ အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်လောကမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုတာ ထမင်းစား ရေသောက်အဆင့် ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ။ ကျမက ဘောလီးဝုဒ်က ထိပ်တန်းမင်းသားတွေ တော်များများနဲ့ အလုပ် လုပ်ဖူးပါတယ်။ ကျမ အမြင်ကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးက မလိုလောက်ဘူးလို့ ထင်တာပဲ” လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။ မနေ့က သူမရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ သူမက စကားတွေ အကြာကြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ ဘယ်သူတွေက ဘာလဲဆိုတဲ့ လှို့ဝှက်ချက်တွေ ကျမ သိထားတာတွေ အများကြီးပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့တွေက ကျမကို အမြဲလို ရန်ရှာချင် နေကြတာပါ။ ဥပမာတစ်ခု ပြောပြမယ် ။ ကျမရဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် ဆိုရင် လာဗီးဂတ်စ်မှာ ရိုက်ကွင်း ထဲမှာတောင် မူးယစ်ဆေးတွေကို သုံးနေတယ်။
အဲ့တုန်းကဆိုရင် နိုင်ငံခြားသူ သူ့ကောင်မလေးကလည်း သူနဲ့အတူ မူယစ်ဆေးတွေကို သုံးနေတာပါပဲ။ ညတိုင်း ပါတီပွဲတွေ လုပ်ပြီး မူးယစ်ဆေးကို ရေလို သုံးနေကြတယ်။ နေ့ခင်းဖက်မှာလည်း LSD တို့ ကိုကင်းတို့ စိတ်ကြွဆေးတွေကို သုံးပြီး ရုပ်ရှင် ရိုက်ကြတာပါပဲ။ အခု ကိုကီလာဘီင်း ဆေးရုံကို တက်နေရတဲ့ တစ်ယောက်ကလည်း အရင်ကတည်းက ဆေးလွန်ပြီး ဆေးရုံ တက်ဖူးပါတယ်”လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
“သူက မူးယစ်ဆေးတွေကို သူ့အဆုတ်ထဲကို တိုက်ရိုက် ရှုသွင်းခဲ့တယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ဆေးရုံကတော့ ဘာမှ မပြောပေမဲ့ ကျမသိပါတယ်။. အဲ့လို သုံးတာကို မြင်ဖူးလို့ပါ။ သူ့ရဲ့ အဆုတ်တစ်ခုလုံး အဲ့ဒိ အမှိုက်တွေ ပြည့်သွားလို့ နေမှာပါ။
ဘောလီဝုဒ်က သရုပ်ဆောင် ၉၉% က မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ပတ်သက်နေပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ရဲတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပါးစပ်ပိတ် ထားကြပါတယ်။ သူတို့တွေက အင်အားကြီးတယ်။ ပါဝါများတယ်။ ကျမက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သူတို့ကို တွန်းလှန်လို့ ရမလဲ။
ဒါကြောင့် သူတို့တွေက ကျမကို ထောင်ထဲကို ပို့ချင် နေကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့သိတာက ကျမက အဲ့ဒိ အတွင်းရေးတွေကို ဖော်လိုက်ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဒီအတိုင်း ကြည့်နေကြတာပါ။ သူတို့တွေက ကျမကို သတ်ချင်နေတာတော့ အမှန်ပါပဲ”လို့ ရီးပါ့ဘလစ်ချန်နယ် နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေခဲ့ပါတယ်။
မောင်ယဿ, REF: Bollywood life, Photo; new track life